Cadaadiska ku-shubista ka-qaadista meelaha bannaan ee fidsan leh kululeeyaha induction ee IGBT MF
Ka-qaadista Cadaadiska Cadaadiska waxaa loo adeegsadaa alwaaxyada birta ah iyo kuwa aan birta ahayn waxaana loogu talagalay in laga saaro culeysyada haraaga ah ee gudaha ah ee ay soo saareen hawlihii wax soo saar ee hore sida mashiinada, rogid qabow iyo alxanka. La'aanteed, habeynta soo socota waxay keeni kartaa dhalanrog aan la aqbali karin iyo / ama maaddadu waxay la kulmi kartaa dhibaatooyin xagga adeegga ah sida dildillaaca daxalka walaaca. Daaweyntu looguma talagalin inay soo saarto isbeddello muhiim ah oo ku yimaada qaababka maaddooyinka ama astaamaha farsamada, sidaas darteedna caadi ahaan waxaa lagu xaddiday heer-kulka aadka u hooseeya.
Kaarboonnada kaarboonnada iyo birta daawaha ah ayaa la siin karaa laba nooc oo ah yareynta buufiska:
1. Daaweynta sida caadiga ah 150-200 ° C waxay yareeysaa culeyska ugu badan ka dib qallafsanaanta iyada oo aan si weyn hoos ugu dhigin qallafsanaanta (tusaale, kiisaska adag ee adag, saa'idka, iwm.)
2. Daaweynta sida caadiga ah 600-680 ° C (tusaale ahaan alxanka ka dib, makiinada iwm) waxay bixisaa gebi ahaanba yareynta buufiska.
Cadaadis ka qaadista meelaha banaan ee birta kaarboon ah qiyaastii 30 fuudh / 9.1 mitir daqiiqaddii si loo yareeyo adkaanta dhinaca 2 "/ 51mm" ee dhinac kasta si looga takhaluso arrimaha dillaacaya ee alaabada ugu dambaysa
Waxyaabaha: Meelaha fidsan ee kaarboonka birta ah (5.7-10.2 "/ 145-259mm ballaaran iyo 0.07-0.1" /1.8-2.5mm qaro weyn)
Joogitaanka: 30 kHz
Qalabka Kuleylka Kuleylka: HLQ 200kW 10-30 kHz nidaamka kuleylka kuleylka ee lagu qalabeeyo saldhigga kuleylka fog oo leh sideed 10 μF capacitors
- Qalab kuleylinta kuleylinta kala-soocida kala-goynta oo isdaba-joog ah oo loogu talagalay loona sameeyay si gaar ah codsigan
Geedi socodka Meelaha birta ah ee kaarboonku ka kooban yahay waxay ku dhex mari doonaan xarig soo jiidasho ah oo ah xaddiga 30 fuudh / 9.1 mitir daqiiqaddii si loo xanaaqo ama loo buuxiyo culeyska birta kaarboonka. Inta hawshani socoto, birta kaarboonku waxay kululaan doontaa 1200 ºF (649 ºC). Tani waxay ku filnaan doontaa in laga saaro qallafsanaanta shaqada 2 "/ 51mm ee dhinac kasta oo ballaca ah.
Xawaare: Induction si dhakhso leh ayuu u kululeeyaa birta kaarboon heerkulka, taas oo awood u siinaysa xaddiga 30 cagood daqiiqaddii
- Waxtarka: Kuleylka induction kaliya ma badbaadinayso waqtiga wax soo saarka, waxay kaloo keydineysaa kharashka tamarta
–Footprint: Induction waxay qaadataa raad yar oo dhexdhexaad ah, markaa si fudud ayaa loogu hirgelin karaa geedi socodka wax soo saarka sida
this ka mid ah
Daaweynta sida caadiga ah 150-200 ° C waxay yareysaa walbahaarka ugu sarreeya ka dib qallafsanaanta iyada oo aan si weyn hoos ugu dhigin qallafsanaanta (tusaale ahaan kiisaska adag ee adag, jihada, iwm.):
- Daaweyntu sida caadiga ah 600-680 ° C (tusaale ahaan alxanka ka dib, makiinadda iwm) waxay bixisaa gebi ahaanba yareynta buufiska.
- Daawaha aan-birta ahayn ayaa culeyska laga dejiyaa heerkullo kala duwan oo badan oo la xiriira nooca iyo xaaladda isku-darka. Daawaha loo yaqaan 'alloys' ee da'da ku adkaaday ayaa ku xaddidan culeyska yareynta heerkulka ka hooseeya heerkulka gabowga.
Biraha biraha ka sameysan ee Austenitic-ka ayaa culeyska laga qaadaa wax ka hooseeya 480 ° C ama ka sarreeya 900 ° C, heerkulka u dhexeeya yareynta caabbinta daxalka ee fasallada aan xasilloonayn ama kaarboon hooseeya. Daaweynta ka sarreysa 900 ° C badiyaa waa anneals xal buuxa ah.
Caadi ahaanshaha Lagu dabaqay qaar, laakiin aan ahayn dhammaan, birta injineernimada, caadiyeynta ayaa jilcin karta, adkeyn karta ama walwal yarayn karta walxaha, iyadoo kuxiran xaaladdiisa bilowga ah. Ujeedada daaweyntu waa in laga hortago saameynta howlaha hore, sida ridaya, been abuurka ama rogista, iyadoo lagu sifeynayo qaab dhismeedka aan isku mid aheyn mid xoojinaya farsamaynta / qaabeynta ama foomamka wax soo saarka qaarkood, oo buuxinaya shuruudaha ugu dambeeya ee hantida farsamo.
Ujeedada ugu horeysa waa in shuruud la geliyo bir si markaa, kadib qaabeynta xigta, qayb ka mid ah ay uga jawaab celiso qancin hawlgal adag (tusaale caawinta xasilloonida cabbirka). Caadiyeeyntu waxay ka kooban tahay kuleylinta bir ku habboon ilaa heerkulka sida caadiga ah inta u dhexeysa 830-950 ° C (heerkulka ama ka sarreeya heerkulka qallafsan ee birta adag, ama ka sarreysa heerkulka carburinta ee biraha xamuulka) ka dibna qaboojinta hawada. Kuleylka waxaa badanaa lagu sameeyaa hawada, sidaas darteed mashiinnada xiga ama dhammaystirka dusha sare ayaa loo baahan yahay si looga saaro miisaanka ama lakabyada burburay.
Birta adkaanta qallajinaysa (tusaale ahaan biraha biraha baabuurta) qaarkood ayaa badanaa "la qaboojiyaa" (subcritically annealed) ka dib marka la caadiyeeyo in la jilciyo qaab dhismeedka iyo / ama kor loogu qaado farsamada. Tilmaamo badan oo diyaaradeed ayaa sidoo kale ku baaqaya isku-darka daaweynta. Birta aan caadi ahaan caadiga ahayn waa kuwa si xoog leh u adkaan doona inta lagu jiro qaboojinta hawada (tusaale, bir badan oo bir ah), ama kuwa aan helin wax faa'iido dhismeed ah ama soo saaraya qaabab aan habboonayn ama qalab farsamo (tusaale ahaan biraha birta ah).
Categories Technologies Tags yareynta walwalka birta kaarboon, Ka-qaadista cadaadiska kuleylka ee kuleylka, yareyso cadaadiska kuleylka ee kuleylka, cadaadiska indho-furista, kululeeyaha yareynaya cadaadiska kuleylka, yareynta cadaadiska, buufinta meelaha banaan, habka yareynta cadaadiska Post navigation